China PSA Nitrogen Kugadzirwa gasi chirimwa Psa Nitrogen jenareta Equipment Psa Nitrogen Machine vagadziri uye vanotengesa | KANA
PSA Nitrogen Kugadzirwa gasi chirimwa Psa Nitrogen jenareta Equipment Psa Nitrogen Machine
Kune iyo imwechete adsorbed gasi (adsorbate) mune chero adsorprtion, yakadzika tembiricha, yakakwira kumanikidza uye yakakura adsorbing chinzvimbo
apo kunwa kunoramba kwakagadzikana; kana zvisina kudaro, iyo yepamusoro tembiricha, yakaderera kumanikidza uye diki kushambadzira chinzvimbo. Kana iyo tembiricha ikaramba isina kuchinjika, desorption ine decompression (yekupomba kupomba) kana pasi peyakajairika kumanikidzwa kunonzi kumanikidza swing adsorption (PSA) mune chiitiko chekushambadzira pasi pekumanikidza.
Sezvinoratidzwa pamusoro, saizi yekushambadzira kweoksijeni uye nitrogen nekabhoni mamoresi sieve inosiyana zvakanyanya. Nitrogen uye okisijeni zvinogona kupatsanurwa nekuda kwekukura kwemusiyano weoxygen uye nitrogen adsorption kubva kumhepo pasi peimwe kumanikidza. Kana kumanikidza kuchikwira, kabhoni yemolekyuli sieve inoshambadza okisijeni uye inogadzira nitrogen; kana iko kumanikidza kukawira kune zvakajairwa, iyo nesefa inonatsa okisijeni uye inogadzirisazve nitrogen. Kazhinji, iyo PSA senitrogen jenareta ine maviri adsorbers, imwe yacho inoshambadza okisijeni uye inogadzira nitrogen, uye imwe inoshayisa oxygen uye inogadzirisazve nitrogen. Nenzira iyi, nitrogen inogadzirwa ichienderera.
1. Iyo midziyo inoshandisa isiri-unipotential kumanikidza-kuenzanisa maitiro kusvikira kushandiswa kwemhepo yakamanikidzwa kuderedzwa zvakananga.
2. Ae inogona kusarudza yakanyanya simba-yekuchengetedza mamoresi sieve zvinoenderana nemamiriro evatengi.
3. Yepamberi mutoro inochinja tekinoroji kuti iwedzere kudzikisa kushandiswa kwesimba.
4. Yepamberi kurongedza tekinoroji yekuita kabhoni mamoresi sieve yakawanda compact uye yunifomu uye kudzikisira kukweshera coefficient.
5. Yakawanda yakavimbika gasi inopa kurapwa kuve nechokwadi adsorption kugona uye sevhisi hupenyu hweiyo nesefa.
6. Switchover mavharuvhu uye zvikamu zvemakambani anozivikanwa anoshandiswa kuona mhando yechigadzirwa.
7. Yepamberi otomatiki humburumbira yekumanikidza tekinoroji.
8. Iyo midziyo inogona kuongororwa pane chaiyo-nguva.
9. Initigiki isina kukodzera inogona kudururwa otomatiki.
10. Hushamwari HMI.
Pashure: Maindasitiri PSA nitrogen inogadzira chirimwa chekutengesa Nitrogen gasi Kugadzira Machine
Zvadaro: Onsite nitrogen kurongedza muchina wekudya indasitiri Chikafu Giredhi Nitrogen jenareta
Psa Nitrogen jenareta Zvishandiso
Liquid Nitrogen Kudyara / Liquid Oxygen Midziyo / L ...
Yakavhenganiswa-firiji Joule-Thomson (MRJT) firiji pane yakaderera tembiricha masosi anotyairwa necompressor imwe ne precooling inoiswa kunwa nitrogen (-180 ℃) yeNitrogen Liquefier kubva kuTIPC, CAS. MRJT, iyo Joule-Thomson kutenderera kunoenderana nekutangazve uye multicomponent yakavhenganiswa-mafiriji kuburikidza nekugadzirisa akasiyana mafriji ane akasiyana mabheetti mapoinzi nemutambo wakanaka pamwe neayo akaringana anoshanda firiji tembiricha masosi, inoshanda ...